‘हामी वार्षिक ८० लाख सन्चो उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्छौं’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्तर्वार्ता / विचार ∕ ‘हामी वार्षिक ८० लाख सन्चो उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्छौं’
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७७ फागुन १७ गते, १३:१० मा प्रकाशित
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो । यो कम्पनीले उत्पादन गर्ने ‘सन्चो’ नेपाली बजारमा चर्चित छ । त्यसबाहेक कम्पनीले अन्य विविध उत्पादनहरु पनि गर्छ । यी उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थहरु प्रयोग हुन्छन् । अहिले कम्पनीले बजारमा माग बढेपछि मासिक ८ लाख पिससम्म सन्चो उत्पादन गरिरहेको छ । यसको उत्पादनका लागि झण्डै ४५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।
कम्पनीले नयाँ उत्पादन थप्ने, उत्पादनलाई थप परिस्कृत गर्ने योजनाअनुसार भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिरहेको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका उत्पादन र बजारमा त्यसको अवस्थाका बारेमा कम्पनीकी चिफ म्यानेफ्र्याक्चरिङ अफिसर उषा रिजाल जोशीसँग हेल्थआवाजले गरेको संवादः
सन्चो उत्पादनको अवस्था के छ ?
सन्चो उत्पादनलाई गत वर्षभन्दा यसवर्ष बढाउने योजना बनाएको छौँ । गत वर्ष ५० लाख उत्पादन गरेका थियौं भने यो वर्ष हामीले ८० लाख पिस सन्चो उत्पादन गर्ने हाम्रो टार्गेट छ । बजारको मागअनुसार हामीले सन्चो उत्पादन गर्ने हो । वर्षको अघि नै हामीले के कति सन्चो उत्पादन गर्ने भन्ने टार्गेट निर्धारण गर्छौं । सोही टार्गेट अन्तर्गत नै हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका हौं ।
यो वर्ष माग बढी भएर उत्पादन बढाउने लक्ष्य तय गरिएको हो ?
कोभिड—१९ महामारीमा रुघाखोकीको औषधीको रुपमा सन्चोको प्रयोग बढी भएकोले यो वर्ष सन्चोको माग धेरै आयो । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म मात्रै ४५ लाखभन्दा बढी सन्चोको पिस बिक्री भएको छ । यो वर्षको आधा वर्षमै हाम्रो ५० प्रतिशत टार्गेट पूरा भएको अवस्था छ ।
बजारमा मागअनुसार नै सन्चो उत्पादन हुने हो ?
हो, बजारको मागअनुसार नै हामीले सन्चो उत्पादन गर्ने हो । बजारको लागि हामी वितरकसँग अन्तरक्रिया गरेर नै काम गर्ने गर्छौं । ३ माहिना अगाडि स्टकमा राख्न पनि भ्याइएन । त्यति धेरै विक्री भयो ।
देशबाहिर यसको पहुँच छ ?
अहिले देश बाहिर निर्यात गर्ने आवश्यक डक्युमेन्ट हामीसँग छैन । तर, देशका सबै ठाउँमा नै पहुँच होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि अझै सन्चो पुग्न नसकेको हामीले सुन्न पाएका छौँ ।
सन्चो उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अवस्था पर्याप्त छ ?
यो माग छ भन्दैमा दायराभन्दा माथि गएर हामी बिक्री वितरण गर्दैनौं । हामीसँग नेपालमै उत्पादन भएको कच्चा पदार्थ कहिले काही पुग्दैन्, जसले गर्दा वाह्य देशबाट पनि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यही समस्याका कारण हामीले पर्याप्त सन्चो उत्पादन गर्ने सकेका छैनौँ । १ करोड सन्चो उत्पादन गर्न सक्यौं भने ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो ।
सन्चोबाहेक कम्पनीका अन्य उत्पादनहरु के—के छन् ?
सन्चोबाहेक हामीसँग गुणस्तरीययुक्त जडिबुटीजन्य तेल जस्तैः हिमालयन ओइल मसाज, सन्चो बाम, शिलाजित, भिक्स उत्पादन हुन्छ । शिलाजितको माग पनि धेरै छ । लकडाउनको अवधिमा हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ‘सन्चो ह्याण्ड स्यानीटाइजर’ नामक स्यानिटाइजर पनि उत्पादन सुरु ग¥यौं । यसले बजारमा रहेका अन्य स्यानिटाइजरजस्तो छालामा असर देखाउँदैन । त्यसैले यसको माग अहिले विस्तारै बजारमा बढिरहेको छ ।
अन्य उत्पादनको बजारमा माग कस्तो छ ?
बजारमा प्रोडक्ट गएको छ । सन्चो नै जसरी अरु उत्पादन गएको छैन । तर पनि उत्पादनहरु विस्तारै—विस्तारै बिक्री भैरहेका छन् । हामीसँग पर्याप्त जनशक्तिको अभाव पनि छ । अझै राम्ररी बजारीकरण हुनसकेको छैन । उत्पादनको मात्रा बढाएसँगै अब मार्केटिङ्ग पनि गर्ने हिसाबले धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्ने योजनामा छौं । हामीले कम्पनीको क्रियाकलापबारे पनि भर्खरै बुलेटिन, ब्रोसरहरु पनि निकालेका छौं ।
धेरै सरकारी कम्पनी घाटामा गैरहेका देखिन्छन् । यो आर्थिक कारोबारको अवस्था के छ ?
हामीले पनि घाटा नव्यहोरेको हैन । अहिलेको अवस्थामा भने उत्पान र प्रशोधन बढाएकोले नाफामै गएका छौं । अब शाखा पनि विस्तार गर्दैछौं । साबुन, स्याम्पु सफ्ट ड्रिंक, हर्बल ड्रिंकहरु पनि निकाल्ने सोच छ ।
सन्चो र हर्बलजस्ता उत्पादनको कारोबार कति छ ?
हाम्रो केही जिल्लामा उब्जाएको खेतीबाट वार्षिक ३० टन सुगन्धित तेल निस्कन्छ । हामी प्रायः नेपालभन्दा बाहिर तेल बेच्छौं । र, त्यसबाहेक तेलबाट धेरै प्रकारका प्रोडक्ट बनाउँछौं । खेतीबाट आएको उत्पादनलाई जम्मा गर्ने, प्रशोधन गर्ने र फिनिसिङ गर्ने हाम्रो प्रक्रिया छ । अहिले कारोबार नै यति भन्दा पनि हामी नाफामा गएका छौं ।
क्याटेगोरी : अन्तर्वार्ता / विचार, वैकल्पिक चिकित्सा